Baibolin' i Lotera - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Baibolin'i Lotera)
Ny Baibolin' i Lotera dia Baiboly voasoratra amin' ny teny alemàna tamin' ny taona 1522, nosoratan' i Martin Lotera, avy amin' ny lahatsoratra fototra (avy amin' ny teny hebreo, ny Testamenta Taloha fa avy amin' ny teny grika ny Testamenta Vaovao), izay nahitana ireo boky ao amin' ny Testamenta Taloha araka ny kanônan' ny Baiboly hebreo (Tanakh) sy ny Testamenta Vaovao ary ny boky deoterôkanônika (izay ataon' ny Prôtestanta hoe "boky apôkrifa"). Ireo "boky apôkrifa" ireo anefa tsy nafangaron' i Lotera tamin' ny boky ao amin' ny Testamenta Taloha eken' ny Prôtestanta akehitriny ho kanônika (izay ataon' ny Katôlika sy Ôrtôdôksa hoe boky prôtôkanônika) fa natokany ho fizaràna hafa. Tsy hita tao amin' ny tabilaom-botoatin' ny Testamenta Taloha ao amin' ny Baibolin' i Lotera tamin' ny taona 1532 ireo boky apôkrifa ireo. Tamin' ny taona 1534 kosa izy ireo vao nomena mazava ny anarana hoe "Apôkrifa" ka izao no filazany azy: "Ireo boky ireo dia tsy mitovy fahefana amin' ny Soratra Masina, nefa mahasoa sy tsara vakîna". Nivoaka tamin' ny taona 1522 ny dikan-tenin' ny Testamenta Vaovao fa ny an' ny Testamenta Taloha kosa tamin' ny taona 1534. Ny Baibolin' i Lotera bno heverina fa sanganasa fototra amin' ny fiteny alemàna ankehitriny.
1 Fiheveran' i Lotera ny boky sasany ao amin' ny Baiboly
2 Fandikan-teny ny Baiboly nataon' i Lotera
2.1 Dikan-tenin' ny Baboly talohan' ny an' i Lotera
2.3 Fadikana ny Testamenta Taloha
2.4 Fahavitan 'ny dikan-tenin' ny Baiboly manontolo
Fiheveran' i Lotera ny boky sasany ao amin' ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]
Fandikan-teny ny Baiboly nataon' i Lotera[hanova | hanova ny fango]
Dikan-tenin' ny Baboly talohan' ny an' i Lotera[hanova | hanova ny fango]
Efa nisy dikan-tenin' ny Baiboly miisa efatra ambin' ny folo tamin' ny fiteny alemàna ambony (alemàna: Hochdeutsche) sy telo tamin' ny fiteny alemàna ambany (Plattdeutsch) talohan' ny an' i Lotera, nefa fandikan-teny ampahany fotsiny ny ankamaroany sady natao avy amin' ny Baiboly katôlika amin' ny teny latina (ny Volgata). Ny dikan-tenin' ny Baiboly manontolo dia nivoaka tamin' ny taona 1466. Sarotra azo anefa ny hevitra ao anatiny noho izy ireo ahitana voanteny latina maro tsy nahitana voanteny mitovy hevitra aminy amin' ny fiteny alemàna.
I Lotera sy ny namany, indrindra fa i Philipp Melanchthon (frantsay: Philippe Mélanchthon), dia niala tamin' ireo dikan-teny taloha ireo fa niainga tamin' ny rijan-teny fototra hebreo sy grika, ary nikatsaka fandikan-teny tsara, izay mora azon' ny akamaroan' ny mpamaky, na tany Alemaina Atsimo izany na tany Alemaina Avaratra, ka fikarohana maharitra no nataony tamin' izany mba hahazoana dikan-teny aisaky ny voanteny. I Huldrych Zwingli dia nanao fandikan-teny koa izay niorina tamin' ny fandikan-teny voalohany nataon' i Lotera.
Rehefa voaongana tsy ho isan' ny Katôlika i Lotera tamin' ny fivoriana tao Worms tamin' ny 26 Mey 1521 dia nialokaloka tany Wartburg, ao akaikin' i Eisenach (any Thuringe) teo ambany fiarovan' i Friedrich III. Nonina tao izy hatramin' izay ka hatramin' ny 6 Marsa 1522, tao no nanombohany nandika teny ny Baiboly.
Tamin' ny fiafaran' ny taona 1521 dia vitany tao anatin' ny iraika ambin' ny folo andro ny fandikana amin' ny teny alemàna ny Testamenta Vaovao (TV). Rinjanteny nataon' i Erasmus tamin' ny teny grika (edisiona faharoa tamin' ny taona 1519) sy ny Volgata no niaingany. Niara-niasa tamin' ny namany sasany izy mba hahitana ny voanteny alemàna mifanaraka tsara amin' ny lahatsoratra grika, ka nandalina ny fomba fitenin' ny vahoaka sy ny voambolana fampiasa andavanandro mba ho mora azo ny dikan-teny. Nanomboka nandika ny Testamenta Taloha (TT) izy taorian' izany nefa tsy nahavita azy hatramin' ny farany.
Ity dikan-tenin' ny Testamenta Vaovao ity, sy ireo dikan-tenin' ny Testamenta Taloha ampahany, dia natonta printy sady navoaka tamin' ny volana Septambra 1522 (TV) sy tamin' ny fiandohan' ny taona 1525 (TT). Tamin' ny taona 1525 dia efa niisa 22 ny fanitsiana ny dikan-teny. Tamin' izany fotoana izany dia Alemàna iray mahavaky teny amin' ny telo no nanana ny Baibolin' i Lotera.
Fadikana ny Testamenta Taloha[hanova | hanova ny fango]
Kely kokoa ny fahalalan' i Lotera ny teny hebreo raha mitaha amin' ny fahalalany ny teny grika, noho izany dia asa nifarimbonany tamin' i Philipp Melanchton sy ny manampahaizana maro hafa toa an' i Johannes Bugenhagen, i Justus Jonas, i Caspar Cruciger, i Matthäus Aurogallus ary i Georg Rörer, ny fandikana ny Testamenta Taloha. Araka ny filazan' ny pastora Johannes Mathesius, raha nitoriteny tamin' ny taona 1564, dia i Melanchton no nanomana ny Septoajinta, i Cruciger no nanomana ny Baibolin' ny raby Jacob Ben Haïm, i Bugenhagen no nanomana ny Volgata, fa i Lotera kosa nanolotra lahatsoratra iray ka namela ireo namany hamoaka ny heviny tsirairay.
Taona maro no lany tamin' ny fandikana ny Testamenta Taloha: tamin' ny volana Oktobra 1524 vao vita ny Pentateoka sy ireo boky ara-tantara ary ireo boky pôetika, tamin' ny Marsa 1526 ny Bokin' i Jônà (na Jônasa), tamin' ny Jona 1526 ny Bokin' i Habakoka, tamin' ny Janoary 1528 ny Bokin' i Zakaria ary tamin' ny Oktobra 1528 ny Bokin' i Isaia (na Izaia). Tamin' ny taona 1529 no nahavitana ny famerenana ny Testamenta Vaovao manontolo ary tamin' ny taona 1530 ny fanaovana edisiona vaovao azy. Taorian' izany ny fanaovana heviteny sy ny fandikan-teny ireo boky deoterôkanônika.
Fahavitan 'ny dikan-tenin' ny Baiboly manontolo[hanova | hanova ny fango]
I Zwingli izay nonina tao Zurich dia nanao fandikàn-teny izay nifototra tamin' ireo dikan-teny voalohan' i Lotera. Nivoaka tamin' ny taona 1531 ny Baibolin' i Zurich, izany hoe telo taona talohan' ny fahavitan' ny fandikan' i Lotera ny Baiboly manontolo.
Tamin' ny volana Oktobra 1534 dia namoaka ny Baiboly feno i Lotera, ka tafiditra tanatin' izany ireo boky apôkrifa (amin' ny hevitra prôtestantan' ny teny hoe "apôkrifa"), ka ny trano printin' i Hans Lufft tany Wittenberg no nanaovana izany. Nisy takelaka miisa 900 izany izay nakambana ho hasim-boky misaraka miisa enina. Ireo hasim-boky enina ireo dia mitakitra: ny Pentateoka, ny boly ara-tantara sy pôetika, ny bokim-paminaniana, ny boky apôkrifa, ary farany ny Testamenta Vaovao. Araka ny fomba tamin' izany fotoana izany dia nisy sary miisa 117, izay vita tamin' ny hazo voasokitra, ny Baibolin' i Lotera. Nanohy nanatsara ny fandikan-teniny i Lotera mandra-pahatapitry ny andom-piainany.
Kanôn' ny Baiboly
Epistily nosoratan' i Jakoba
Epistily nosoratan' i Joda
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Baibolin%27_i_Lotera&oldid=1038290"
Voaova farany tamin'ny 1 Oktobra 2021 amin'ny 08:12 ity pejy ity.